အာဖရိကချန်ပီယံလိဂ်: နောက်ဆုံးပြန်လာကြားနေမြေပြင်ပေါ်တွင်အကွိမျကွိပါလိမ့်မည် - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » ပုံမှန်မဟုတ်သော • အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ • အားကစားများ "အာဖရိကချန်ပီယံလိဂ်: နောက်ဆုံးပြန်လာကြားနေမြေပြင်ပေါ်တွင်အကွိမျကွိပါလိမ့်မည်
Eliséoမင်းသမီး Emma Kamgang6ဇွန်လ 2019
Esperance ကျူးနစ်တစ်ဦး fiasco သို့လှည့်ကျတဲ့နောက်ဆုံးအပြီးသရဖူဆောင်းခဲ့သညျ။
Esperance နှင့် Wydad Casablanca အကြားအာဖရိကချန်ပီယံလိဂ်ရဲ့နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးမှာ CAN-2019 ပြီးနောက်အကွိမျကွိလိမ့်မည်။ အဆိုပါအဘိဓါန် Moroccan ကလပ်တစ်ခုခုံသမာဓိဆုအားစိန်ခေါ်ပြီးနောက်ပွဲစဉ်ဖြည့်စွက်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
အပေါ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့5ဇွန်လအသံထွက်နေသည်ဒါဟာနောက်ဆုံးမှာအာဖရိကဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (က CAF) အတွက်အစည်းအဝေးများနီးပါးနှစ်ရက်ယူပါလိမ့်မယ် အာဖရိကဘောလုံးချန်ပီယံများ၏အဖွဲ့ချုပ်၏နောက်ဆုံးများ၏ fiasco။ ပြီးခဲ့သည့်သောကြာနေ့ထားရာအဆိုပါပွဲစဉ်သည်ပြီးနောက် Esperance နှင့် Wydad Casablanca နောက်ဆုံးမှာအပြည့်အဝအတွက်အကွိမျကွိပါလိမ့်မည် လုပ်. နိုင်သလား-2019, အာဖရိကဘောလုံး၏အုပျခြုပျရေးအဖှဲ့ကြေညာခဲ့သည်။
တူနီးရှား 58 1 (မှဦးဆောင်ခဲ့ကြသည်အဖြစ်အစည်းအဝေးတစ်ခု, အ 0e မိနစ်ကြားဖြတ်ပြီးနောက်ပြီးခဲ့သည့်သောကြာနေ့သရဖူဆောင်းခဲ့ချိန် မှစ. ဖြစ်ကောင်းတူနီးရှားခြမ်း Esperance ကျူးနစ်အပေါ်အချို့သောတင်းမာမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးကဆုံးဖြတ်ချက် သွားကြဖို့ 1-1) ။ အဆိုပါကလပ်ပြီးသားသူရှိရပ်တန့်မညွှန်ပြခဲ့ပါသည်။
ကြားနေမြေပြင်ပေါ်တွင်နောက်ဆုံးပြန်လာပြန်ဖွင်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက် inadmissible ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ #TAS သို့ ဝင်. လိမ့်မည်။
18: 45 -52019 ဇွန်လ
သူတို့နောက်ဆုံးမှာအစည်းအဝေး၏ Gambian ဒိုင်လူကြီးမစ္စတာ Gassama အားဖြင့် invalidated တစ်ဦးရည်မှန်းချက်ဂိုးသွင်းခဲ့သည့်အခါကစားသမားတွေ Wydad ကစားပြန်လည်စတင်ဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့ကြောင်းအဖြစ်နောက်ဆုံးပြီးစီးဖို့မသွားနိုင်ဘူး။ အဘိဓါန် Moroccan ကစားသမားမရှိဟုဆို၏ဖို့, ဗီဒီယိုအကူအညီ (var) တိုင်ပင်ဖို့အနက်ရောင်ထဲမှာလူကိုခေါ်ခဲ့သည်။
ဂိမ်းပြန်လည်စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မတိုင်မီတစ်နာရီနှင့်တစ်နှစ်ခွဲချိုးပြီးနောက်ပွဲစဉ်နောက်ဆုံးတော့လေချွန်ခဲ့သည်နှင့် ES ကျူးနစ်ယေဘုယျအံ့သြခြင်းငှါ, ဆုရှင်ရဲ့ဖလားရရှိခဲ့သည်။
ပိုပြီးကြားနေမြေပြင်ပေါ်တွင်အရာနောက်ဆုံးပြန်လာ, ပြန်ဖွင်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်, Esperance ၏ပရိသတ်များအဘို့အနှစ်ဆပြစ်ဒဏ်အဖြစ်ကိုရိပ်မိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ က CAF ၏အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီသည်မတ်တပ်ရပ်ရာအရပ်မှပဲရစ်မြို့ကိုစုဝေးစေသူအခြို့ "သူတို့ရဲ့အမျက်ဒေါသထုတ်ဖော်ပြောဆို" ကိုလည်းရဲခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရတော်မူသောငါတို့၏အထူး Perrochais ဘင်နီဒစ်, အစီရင်ခံတင်ပြ ရန်နည်းလမ်းကလူငြိမ်သက်ဖို့ "တချို့ဂျက်လေယာဉ်များဓာတ်ငွေ့ကိုက်ဖြတ်" ။
ထို့နောက်သဖြင့်ပုံစံသစ်ဘဲနေလျှင်, အာဖရိကချန်ပီယံလိဂ်ရဲ့နောက်ဆုံးပြီးသားသမိုင်းနောက်ဆုံးအဖြစ် 19 ဇူလိုင်လပြီးနောက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ပါလိမ့်မည် နိုင်ငံများအသင်းအာဖရိကဖလား ထိုရက်စွဲပေါ်တွင်နေရာတစ်နေရာယူပါလိမ့်မယ်။
La @CAF_Online ချန်ပီယံလိဂ်ရဲ့နောက်ဆုံးပြန်ဖွင်ရန်ဆုံးဖြတ်ထားပြီး #ESTWAC ကြားနေမြေပြင်ပေါ်မှာ။ unsporting အပြုအမူဆုချတဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ထုံးတမ်းစဉ်လာသတ်မှတ်နှင့်ပြီးသားသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာတစ်သမ္မတပျံ့နှံ့စိတ်ကူးပံ့ပိုးသောတစ်ဦးကမေးခွန်းထုတ်စရာဆုံးဖြတ်ချက်။
အရင်းအမြစ်: https: //www.france24.com/fr/20190605-football-ligue-champions-africaine-es-tunis-wydad-casablanca-finale-rejouee-caf
ခြေလျင် PSG အသင်း - PSG အသင်း: Keylor Navas al-Khelaifi ခြင်းဖြင့်အစပျိုးစစ်ဆင်ရေး! - ခြေလျင် 01